अमेरिकामा रहेका हरेक करदाताले पाउने भए १२ सय डलर राहत, कसले कसरी पाउँछन् ? – Nepal Japan
नेपाल जापान १५ चैत्र २१:३२
कोरोना भाइरसको संक्रमणमा विश्वकै अग्रणी मुलुक बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आर्थिक संकटसँग जुध्न अमेरिकामा रहेका हरेक करदातालाई १२ सय डलर दिने लगायतका विषयहरु समेटिएको प्याकेज अमेरिकाको दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर समेत गरिसक्नुभएको छ ।
अमेरिकाले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिसंग जुध्न २० अर्ब भन्दा बढी डलरको राहत अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपतकालिन राहत प्याकेज हो ।
राहत प्याकेज अनुसार एकजना करदातालाई १२ सय डलर, विवाहितलाई २४ सय डलर र १७ बर्षभन्दा कम उमेरका परिवारका सदस्यका लागि थप ५ सय डलर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । बार्षिक ७५ हजार भन्दा कम आम्दानी हुने एकजनालाई १२ सय डलर प्रदान गरिने छ । यदि दम्पत्तिले ज्वाइन्ट ट्याक्स फाइल गरेका छन् र उनीहरुको आम्दानी बार्षिक १ लाख ५० हजार भन्दा कम रहेको छ भने उनीहरुले २४ सय डलर प्राप्त गर्नेछन् ।
राहत रकम २ सातामा पठाउने ह्वाइट हाउसको प्रस्ताव रहे पनि त्योभन्दा लामो समय लाग्नसक्ने जनाइएको छ । सन् २००८ मा रकम पठाउन झण्डै २ महिनाको समय लागेको थियो । आइआरएससँग धेरैजनाको डाइरेक्ट डिपोजिट विवरण भएकाले त्यही एकाउन्टमार्फत पठाउन सकिने जनाइएको छ ।
कसले कसरी कति पाउँछन् ? यस विषयमा अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने खसोखास अनलाइनको विवरण यस्तो छ-